vendredi, 04 mars 2016 08:06
Maroantsetra : Nilamin-dratsy
Nilamindamina anio maraina ny tany Maroantsetra taorian'ny fitraotran'ny vahoaka vokatry ny fisamborana ka nanagadrana ilay mpiompy lazaina fa nanao fitsaram-bahoaka ka nahafaty ilay mpangalatr'omby tany an-toerana. Nidiran'ny vahoaka an-keriny tokoa manko tao amin'ny lapan'ny Fitsarana, ary noraisin'izy ireo tamin'ny vozona ankanjony ny mpitsara mpampanoa lalàna, nodoran'izy ireo ny antonta-taratasim-pitsarana maro.
Tetezana Amboanjobe, manoloana ny vavahadin’ny hotely Resto Gasy
jeudi, 03 mars 2016 18:15
Sary nindramina FB
Lalànan’ny fifamoivoizana : Ny Fanjakana aza tsy manaja
Nitohana izay tsy izy ny fifamoivoizana tamin’ny lalam-pirenena faha-7 iny androany. Ny antony dia nihitsoka teo ambany tetezana Amboanjobe, manoloana ny vavahadin’ny hotely Resto Gasy ny fiarabe nitondra milina mpihary herinaratry ny Jirama, nalaina avy eny Antanandrano hafindra any Behenjy. Avo loatra mihoatra ny fetra voatondro, ny milina nobaben’ilay fiarabe ka nidona tamin’ny tetezana. Misoratra mivandravandra eo amin’ny fototr’ilay tetezana fa 4,50m no fetra haavo afaka mandalo ao ambany tetezana. Tsy voahaja izany matoa nihitsoka ilay fiarabe. Tokony efa fantatry ny Fanjakana mialoha anefa izany, vao nohetsehina ilay milina. Voaporofo teto indray fa tsy misy governemanta miasa izany eto. Aiza ilay hoe : “Gouverner c’est prévoir” ? Fiarovan-tseza no manahirana ny sasany, hany ka ny vahoaka no mizaka ny vokany. Fatiantoka iray lavaka ho an’ireo namonjy fotoana, satria dia nitandavana ampolony kilaometatra ny fitohanan’ny fiarakodia avy any atsimo androany. Tsy lazaina intsony ny nahazo ireo marary nila famindran-toerana maika taty an-drenivohitra androany ?
Ben’ny tanàna, Paul Razanakolona
jeudi, 03 mars 2016 18:12
Paka 2016 : Vonona ny tanànan’Antsirabe
Vonona amin’ny fiatrehana ny fetin’ny Paka ny tananan’ Antsirabe, hoy ny Ben’ny tanàna, Paul Razanakolona. Efa voafandriky ny orinasa Star sy ny Comadis ny manoloana ny gara aloha hatreto, izay hisian’ny hetsika ara-javakanto isan-karazany, tafiditra amin’ny fisantarana ny THB Tour izany. Hisy ihany koa ny hetsika ara-pilazantsara eny amin’ny kianjan’ny kolontsaina ankoatry ny hetsika maro amina toerana samihafa ao Antsirabe. Entin’ny Kaominina manontolo hanasoavana ny tananan’Antsirabe ny vola azo amin’ity Paka 2016 ity raha ny fampanantenan’ny mpitantana ny tanàna. Isan’ny hanaovana ezaka manokana moa ny lafiny fanadiovana sy fidiovana amin’ity Paka 2016 ity raha ny nambaran’i Paul Razanakolona ihany.
dimanche, 28 février 2016 16:36
Sary Augustin Andriamananoro
Tontolo iainana : Namboly hazo ny MAPAR
Nifamotoana teny Ambohipamonjy, Fokontany Faliarivo omaly sabotsy 27 febroary ireo mpikambana MAPAR Ampitatafika – Atsimondrano nanatanteraka fambolen-kazo, fandraisan’izy ireo anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sady adidy amin’ny tanindrazana rahateo.
samedi, 27 février 2016 22:07
Fanampoizinana : Zanaka Lehiben’ny Fokontany saika niharan’ny fitsaram-bahoaka
Voasary notsindromina asidra nampitondraina olona homena ramatoa iray no niandohan’ny olana. Tovovavy, 15 taona eo, no mpaniraka ary zanaka lehiben'ny Fokontany, tovolahy kosa no niangaviany hitondra ny voasary, noho ity tovolahy ity mpiray tanàna amin'ilay olona homena azy.
samedi, 27 février 2016 21:51
Kolikoly : Namaky bantsilana ireo Mpisolovava ao Ambatondrazaka
Manjaka ny kolikoly any Alaotra hoy ireo mpisolovava ao Ambatondrazaka tamin’ny teny nahitsy. Mitondra faisana amin’izany kolikoly izany ireo olona mila raharaha eny anivon’ny Fitsarana sy ny sampandraharaham-panjakana samihafa any an-toerana.
jeudi, 25 février 2016 21:35
Tsy fandriampahalemana : Bala aman-jatony saika hamidy tratra tany Lavaraty-Midongy Atsimo
Misy bala aman-jatony tratra tany amin’ny Kaominina Soakibany sy tany Lavaraty Kaominina Ivondro Distrikan'i Midongy Atsimo ny alin’ny alahady 21 febroary teo.
Governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara Rasolofondraibe Alain
jeudi, 25 février 2016 20:16
Banky Foiben’i Madagasikara : Mitsidika any SAVA ny Governora Rasolofondraibe
Manao fitsidiana arak’asa any amin’ny faritra SAVA ny Governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara Rasolofondraibe Alain. Tao Sambava izy androany maraina nihaona tamin’ireo sehatr’asan’ny Banky samihafa ary ireo mpandraharaha sy ireo avy tao amin’ny Faritra sy ny Prefektora ary ny Mpitandro filaminana.
jeudi, 25 février 2016 18:05
RN 32 Antsohihy-Mandritsara : 20 taona tsy nasiam-panamboarana
Mila hitoka-monina ny vahoakan’i Mandritsara amin’ny haratsin’ny lalam-pirenena faha-32 mampitohy ny renivohitry ny Faritra Sofia, dia Antsohihy amin’i Befandriana Avaratra mipaka any Mandritsara. 20 taona tsy nasian’ny Fanjakana fanamboarana ny lalana mirefy 160 km, mitsinjara ho 81 km manelanelana an’Antsohihy amin’i Befandriana Avaratra miampy 79 km eo anelanelan’i Befandriana Avaratra sy Mandritsara.
jeudi, 25 février 2016 17:27
Halatr’omby hafakely : Ny zanany tao an-kibony no nalaina
Nitrangana halatr’omby tao amin’ny Fokontany Bemololo-Andranomanelatra, Distrikan’Antsirabe II, ny alin’ny talata hifoha alarobia lasa teo. Nampiahiahy ny tranga satria tsy mbola fahitan’ny olona ny zava-niseho fa toa misy ambadika maizina ilay izy.